GoldReserve စျေး - အွန်လိုင်း XGR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GoldReserve (XGR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GoldReserve (XGR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GoldReserve ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GoldReserve တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GoldReserve များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GoldReserveXGR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0164GoldReserveXGR သို့ ယူရိုEUR€0.0138GoldReserveXGR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0125GoldReserveXGR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0149GoldReserveXGR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.146GoldReserveXGR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.103GoldReserveXGR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.36GoldReserveXGR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0607GoldReserveXGR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0217GoldReserveXGR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0227GoldReserveXGR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.365GoldReserveXGR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.127GoldReserveXGR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0866GoldReserveXGR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.23GoldReserveXGR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.75GoldReserveXGR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0224GoldReserveXGR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0246GoldReserveXGR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.508GoldReserveXGR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.113GoldReserveXGR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.73GoldReserveXGR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩19.4GoldReserveXGR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6.32GoldReserveXGR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.19GoldReserveXGR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.453
GoldReserveXGR သို့ BitcoinBTC0.000001 GoldReserveXGR သို့ EthereumETH0.00004 GoldReserveXGR သို့ LitecoinLTC0.00028 GoldReserveXGR သို့ DigitalCashDASH0.000178 GoldReserveXGR သို့ MoneroXMR0.000182 GoldReserveXGR သို့ NxtNXT1.31 GoldReserveXGR သို့ Ethereum ClassicETC0.00227 GoldReserveXGR သို့ DogecoinDOGE4.83 GoldReserveXGR သို့ ZCashZEC0.000169 GoldReserveXGR သို့ BitsharesBTS0.624 GoldReserveXGR သို့ DigiByteDGB0.631 GoldReserveXGR သို့ RippleXRP0.0543 GoldReserveXGR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000559 GoldReserveXGR သို့ PeerCoinPPC0.0544 GoldReserveXGR သို့ CraigsCoinCRAIG7.38 GoldReserveXGR သို့ BitstakeXBS0.691 GoldReserveXGR သို့ PayCoinXPY0.283 GoldReserveXGR သို့ ProsperCoinPRC2.03 GoldReserveXGR သို့ YbCoinYBC0.000009 GoldReserveXGR သို့ DarkKushDANK5.2 GoldReserveXGR သို့ GiveCoinGIVE35.08 GoldReserveXGR သို့ KoboCoinKOBO3.56 GoldReserveXGR သို့ DarkTokenDT0.0151 GoldReserveXGR သို့ CETUS CoinCETI46.77
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 22:15:03 +0000.